Sababta oo ah Qiimaha qiimaha ESLaad ayuu uga duwan yahay alaabada dadka kale, kama tagno dhamaan macluumaadka badeecada shabakadeena si looga fogaado in la koobiyeysto. Fadlan la xiriir shaqaalaheena iibka waxayna kuu soo diri doonaan macluumaadka faahfaahsan.
Sidee calaamadaha ESL u shaqeeyaa?
Dhameystiran Calaamada ESL nidaamku wuxuu ka kooban yahay afar qaybood: kombiyuutarka ugu weyn PC, shaashadda EPD, Calaamada ESL iyo qalabka gacanta ee gacanta lagu qaato ee casriga ah.
Calaamada ESL Marka hore, macluumaadka badeecada ku jirta keydka macluumaadka waxaa ku qoran kombiyuutarka martida loo marayo Calaamada ESLbarnaamijka softiweerka ah, ka dibna qiimaha iyo macluumaadka kale ee loo baahan yahay in la cusbooneysiiyo loo gudbiyo xiisaha iyada oo loo marayo Ethernet (ama dekedda isgaarsiinta taxanaha ah); exciter ayaa wado anteenada loop-ka si uu u soo raro Calaamadaha raadiyaha RF ee wata macluumaadka macluumaadka badeecada waxaa loo dirayaa dukaanka oo dhan.
The Calaamada ESL Nidaamku wuxuu leeyahay laba hawlood oo isgaarsiineed: dhibic-ilaa-dhibic iyo koox dirid, taasi waa: kumbuyuutarka martida loo yahay wuxuu u gudbin karaa xogta la cayimay Calaamada ESL, ama dhammaantood Calaamadaha ESL isla markaba Xakamee. Calaamada ESL asi hufan ugu guuleystey shelf-ka barnaamijka kombiyuutarka, ka takhalusida xaaladda ku saabsan gacan ku beddelka sicirka qiimaha, iyo ku guuleysiga isku dheelitirnaanta qiimaha u dhexeeya diiwaanka lacagta iyo shelf.
Mid kasta Calaamada ESL wuxuu kaydiyaa qaybo badan oo macluumaad ah oo ku saabsan badeecada u dhiganta, iibiyaha ayaa si fudud u hubin kara una hubin kara iyadoo la kaashanayo qalabka terminal ee gacanta lagu qaato ee casriga ah.
Maxay Tahay Sababta Loo Doortaa sumadda qiimaha ESL-ka?
1. Qiimaha qiimaha ESL waa mid aad loogu kalsoonaan karo
Qalabaynta maaraynta hawlgalka, kormeerka otomaatiga ah iyo habka digniinta ugu horayso, waxqabadka waraaqda elektiroonigga ah ee wanaagsan, gudbinta xogta la duubay, nolosha batteriga oo ka badan 5 sano
2.Qiimaha qiimaha ESL waa mid aad u habboon
Hal-guji isbeddelka qiimaha, hagaajinta nidaamka fog ee softiweerka, farsamooyinka tooska ah ee loo yaqaan 'ESL round-robin', dib u soo noqoshada otomaatigga ka dib koronto la'aan, rakibid fudud iyo hawlgal fudud
3. Qiimaha qiimaha ESL hawlgal dabacsan
Taageer beddel shaashad badan, shaashad gaar ahaaneed oo qiimo gaar ah leh, la kulan deegaanno luqado badan leh, oo la jaan qaada dhuftoyo badan oo terminal ah, qalab hodan ah, la jaanqaadi kara xaalado badan
Codsi wax ku ool ah: Qiimaha qiimaha ESLwuxuu ciyaaraa doorka gudbinta macluumaadka iyo wadaha wadaha ee dukaanka, la macaamilka macaamiisha, kaaliyeyaasha dukaanka, iyo xarunta dhexe cabbirro badan si loo hagaajiyo khibrada macaamiisha, loo hagaajiyo socodka shaqada, loona ogaado hawlgalka dhexe iyo maaraynta dayactirka. Dukaamada sidoo kale waxay ku xirmi karaan khadka tooska ah iyo khad la'aanta iyadoo loo marayoQiimaha qiimaha ESL, oo awood u siineysa dukaamada jireed inay soo saaraan, soo ururiyaan, falanqeeyaan kuna shaqeeyaan xogta habdhaqanka macaamiisha, ayna siiyaan aasaaska xogta dukaamada si ay u gaaraan suuq geyn sax ah. Marka loo barbardhigo hababka suuq-geynta dhaqameed sida kala-goynta khadka tooska ah iyo khadka tooska ah, habab keli ah, xiriiro go'an, halka ay kheyraadka ku sugan yihiin oo aan caddayn, iyo dhibaatada raadinta saamaynta ugu dambeysa ee suuq-geynta, suuq-geynta saxda ah waxaa si fudud loogu gaari karaa iyadoo la adeegsanayo isku-darka shaashadda baarkaQiimaha qiimaha ESL. Nidaamka oo dhanna waa lala socdaa, xakameynta waqtiga-dhabta ah, si loo kordhiyo saameynta suuq-geynta.
Cabir 45mm (V) * 89mm (H) * 13.5mm (D)
Muuji midab Madow, caddaan, jaalle
Qaraarka 296 (H) × 128 (V)
Muujin Erey / Sawir
Heerkulka hawlgalka 0 ~ 50 ℃
Heerkulka keydinta -10 ~ 60 ℃
Nolosha batteriga 5 sano
Waxaan leenahay kuwo badan Calaamadaha qiimaha ESL adigu aad kala doorato, had iyo jeer waxaa jira mid adiga kugu habboon! Hadda waxaad uga tagi kartaa macluumaadkaaga qaaliga ah sanduuqa wadahadalka ee geeska midig ee hoose, waxaanan kula soo xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.
MRB ESL qiimaha tag HL290 video
Hore: Qiimaha elektiroonigga ah ee MRB HL213F ee cuntada la qaboojiyey
Xiga: MRB e sumadda qiimaha khad HL420
Qiimaha elektiroonigga ah ee MRB HL213F ee cuntada la qaboojiyey
Nidaamka sumadda MRB ESL HL750
MRB ESL saldhigga saldhigga HLS01
Nidaamka sumadda shelf ee MRB HL213
MRB sumadda qiimaha dhijitaalka ah HL154